QAADACAADII QALLIINKII MADAX BADALKA
QAADACAAD KEDIS AH OO KA TIMI WIILKII LAGU SAMEYNAAYAY QALLIINKII MADAX BADALKA
DIB U XASUUSIN
Waxa sanaddadi tegey ee 2015-kii iyo 2016-ki aad loogu daabacay dhamaan warbaahinta kala duwan ee aduunka qalliin aan noociisa wali la isku dayin in lagu sameeyo dadka. Waxa hadal haynta ugu badan ee warbaahinta aduunka iyo dadka dhex socotayna ahayd arrinkan aan noociisa hore loo maqal ee kusoo biiiray qalliinada kala duwan ee dadka lagu sameeyo kaasi oo noqdey mid ka yaabiyey dadkii iyo dawladahii aduunka.
Waa qalliin lagu sameynaayo in qof lagaga badalo madaxiisa oo lagu xidho jidh aan kiisi ahayn si kale haddaynu u dhigno waxa macanaheedu tahay in qof jidhkiisa qaarkiisa hoose laga badalo, oo jidh aan kiisi ahayn lagu rakibo madaxiisa.
Kala duwanaanshaha aragtida laga qabo qalliinkan waxay noqotay mid aad ugu faaftay adduunka dhamaan, qofkastane sida ay ugu muuqato waa mid uu la gooni la noqdey ama dadka kala siman yahay, tusaale ahaan; ma saxsan yahay, mala samayn karaa, marka loo eego xeerarka iyo dhaqanada culuumta caafimaadka ma yahay mid banaan, ma lagu guuleysan doonaa, waa intee odoroska lagu guuleysan karaa iyo suaalo kale oo badan baa noqdey kuwa ugu badan ee dadka is weydiiyo.
Waxa qalliinkaas usoo xadhko xidhey in uu sameeyo diktoor u dhashay wadanka Talyaaniga oo la dhaho Dr. Canavero. Waxa diktoorkusanadkaas tagey ku mashquul sanaa diyaarinta kharashkii, qalabkii, daawadii iyo wax kasta oo ka caawinaayay si uu u hawl galo. waxa sidoo kale qorshaha ugu jirey kala doorasho si uu usoo xusho ciddii hawshan kala qayb qaadan lahayd. Waxa Dr. Canavero qalliinka in uu la sameeyo kusoo biirey dhakhtar u dhashay wadanka China oo magaciisu yahay Dr. Xiaoping Ren. Dr. Ren waxa uu hore u hogaaminaayay qalliin lagu sameeyay Dameer oo kan oo kale ah.
Qalliinka dameerkan lagu sameeyay waxa lagu sheegay mid guuleystay maadaama oo dameerka nolol kusoo kacay, waxaana uu sii noolaa muddo 20 saacaddood ah.
Dr. Canavero waa diktoorka samayn doona qalliinkan
Sida qorshaha loo baahiyay aduun weynahana loosoo gaadhsiiyay waxa qalliinkan in lagu sameeyo si mutadawacnimo ah u ogolaaday isla sandkaas tagey nin dhalinyar ah oo u dhashay wadanka Ruushka oo magaciisu yahay Valery Spiridonov. Wiilkan dhalinyarta ah waa nin saynisyahan ah oo ku xeel dheer Cilmiga koombiyuutarka.
Akhristoow sababta ku kaliftey in wiilkan ogolaado qalliinkan waad is weydiise, wiilkan waxa uu qabaa xanuun lagu soo dhasho oo hidde ah kaasi oo ku dhaca dareen wadayaasha, xangulaha iyo muruqyada qofka kana dhiga kuwo naafo dhul yaaal ah, inta badana waxa lagu yaqaan xubnaha iyo jidhka intiisa hoose waxa ay ka yar tahay intiisa sare. Xanuunkan waxa la dhahaa Werdnig-Hoffmann Disease, xanuunkan kuma badna aduunka waa xanuun naadir ah.
Sida qalliinku ahaa loona qorsheeyay wiilkana ku aqbalay waxa wiilkan laga badalaya qaarka hoose ee jidhkiisa maadama uu yahay qaybta naafada ah, kadib waxa madaxiisa lagu rakibayaa jidh aan kiisa ahayn macnahii waxa lagasoo goynayaa madaxa, kadib madaxiisa waxa lagu rakibayaa jidh kale oo aan kiisi ahayn, waxa markaa meesha ka baxaya jidhkiisa qaarkiisi hoose ee naafada ahayd iyada oo loogu badalayo qaar hoose (jidh) caafimad qaba oo qof kale leeyahay.
Waqtigii lagu dhawaaqay in qalliinkan la samayn doono waxa si weyn uga so hor jeestay dhamaan wadamada Qaarada Yurub iyo Ameerika, waxaase waqtigaas soo dhaweeyay wadanka China oo ahaa meesha lagu waday in uu ka qabsoomi doono qalliinkani. Marka la eego xogaha kala duwan ee kasoo baxaya waxa lagu wadaa in qalliinka hawshiisa la galo dabayaaqada sanadkan imika gabo-gaboda kusii dhaw 2017-ka.
Haddaba akhristow maanta waxay aynu joognaa sanadkii loogu talo galay in uu qabsoomo qalliinkani, waxa sidoo kale aynu kaga jirnaa bilahii ugu dambeeyay ee qorshaha uu ahaa in la sameeyo. Waxa ka hadhsan ugu badnaan laba bilood iyo maalmo kooban, waa horaanta bisha 12aad ee sanadkan aynu ku jirno.
QAADACAAD LAMA FILAAN AH!!
Dedaal iyo tacab badan oo uu ku jirey diktoorka samayn lahaa qallinkan iyo dhamaan kooxdii la shaqaynaysay ee kala qayb qaadanaysay qalliinkan waxa ay ahaayen kuwo si weyn u diyaar ugu ah in hawshan laga dhabeeyo laguna qabto xiliga loo balamay.
Waxa sido kale jirey tijaabooyin badan oo qaliinkan oo kale ah oo kolba mid La isku dayay, ha ugu dambeeyo mid lagu sameey jiir ama dooli o lagu guuleystay inta lagu jirey sanadkan.
Dr. Canavero oo ah diktoorka masuulka iyo madaxa ka ah qalliinkan waxa sanadkii tagey aad isugu dhawaayeen wiilka qallinka lagu samaynaayo, waxa in badan uu kala qayb galay goobo iyo madalo kala duwan. Dhinaca kale waxa wiilku muddadaas aad uga shaqaynaayay hawshan waxaana uu madalo badan ka sheegay in uu qallinkan gali doono addunkana u hor seedi doono dariiq cusub oo xal loogu helo dadka naafada ah.
Hadalada caanka noqdey ee ka hadhay wiilka qalliinkan lagu samayn doono waxa kamid ahaa “haddii aad rabto in wax kuu qabsoomaan, waa in aad ka qayb qaadata”
Hawsha sidaa u socotay ee lahayd diyaargarawgeeda, tacabkeeda, soo jeedkeeda, dhibkeeda iyo kharashkeeda ayaa mar qudha si lama filaan ah gaddaal iska badashay.
Waxa qalliinki in lagu sameeyo mar qudha qaadacay diidmo adagna kala hor yimi wiilkii dhalinyarada ee sida qorshahu ahaa la rabay in uu noqdo qofka qalliinka lagu sameynaayo.
Valery Spiridonov oo da’diisa 31 jir tahay, waxa uu si lama filaan ah soo saaray war saxaafadeed uu ku cadeynaayo in aanu diyaar u ahayn in uu galo qalliinkan.
Waxa uu cadeeyay in rajadii ahayd in qalliinkan lasameeyo iyo rajadiisi ahayd in uu helo nolol tan ka fiican in ay dhamaatay, isaguna aanu diyaar u ahayn in uu sii wado hawshan.
Spiridonov waxa uu muddadii u danbeeysay iyo kahor ba ku dhawaad laba sanno la shaqaynaayay Dr. Canavero oo ah diktoorki hawshan qabanayay.
Waxa uu Spiridonov sheegay in uu isagu masuul ka noqon doono caafimadkisa meesha uu la tagaayo iyo sida uu ka yeelaayo labadaba, waxa sidoo kale uu xusay in ay jiraan habab kale oo hore loo tijaabiyay oo ku haboon xanuunkiisan sida tusaale ahaan in bir loo galiyo dhabarka kana taageerta in uu si fiican u istaago.
Spiridonov waxaa uu cadeeyay in qalliinkani aanu siinayn in muruqyadiisa u shaqeeyan si xoogan ama in looso celin karin sida imika u shaqaynayaan sidoo kalena aanu rajeynahayn in uu socdo ama dhaqaaqo.
Sababaha ugu wayn ee ku diidey Spiridonov qalliinkan waxa iyana ka mid ah in aanu wali fahmin ogayna khatarka uu yeelan karo qalliinkani.
Sababaha uu ku diiidey intaas uun kuma koobine waxa sido kale uu xusay in ay jiraan goobo lamid ah iyo khubaro lamid ah dadka hawshan qaban kara oo laga heli karo wadanka uu u dhashay ee Ruush-ka.
Waxa Spiridonov mahad celin iyo taageero u muujiyay dictoorkii uu hawsha lasoo waday muddada laba sanno. Waxa uu ku dhiiri galiyay in uu hawhsan sii wado laakiin isaga aanu diyaar u ahayn maadaama isaga uu sheegay in uu kamid yahay kooxda shirkadaha sameeya kompiyuutaraadka sida dadka u sameesan una shaqeeya ee dadka kaa caawiya in qaadaan ama qabtaan alaabaha iyo waxyaalaha aadka u culus. Sido kale waxa sheegay in uu wado samaynta gawaadhida dadkaa naafada ah adeegsadaan ee casriga ah rajo badana uu siin doono dadka naafada ah sidaa darteed aanu gali karin qalliin katartiisa aanu hubin.
Waxa ugu danbeyn uu xusey hadalkiisana kusoo koobay in ay jirto gabadh sheeko wadaag ay yihiin waqti dheer iyo nolol fiiicana wada qaateen meelo badan oo dunida dacaladeeda ahna u wada socdaaleen.
Waxa war saxaafadeedkan iyo jawaaabta kasoo baxday Spiridonov ay amakaag iyo falaadh ku noqotay diktoorki usoo tafo xaytay in uu hawshan ka dhabeeyo walaw aduunka intiisa kale cadaadis iyo cambaarayn kaga socotay.
Lama filaan iyo u qaadan waa ayay ku noqotay mar qudha in uu wiilkii muddada ay wada shaqaynaayeen uu hadalkaas kaso yeedho.
Haddaba hawl loo kacay ma yara sida looga hadhaana ma ma fududa, waxa isna dhankiisa diktoorki qalliinka hawshiisa waday uu ku dhawaaqay in qalliinkii aanu istaagi doonin lana qaban doono xiligii loogu talo galay iyo gooobtii loogu talo galay hase ahaatee qalliinka aan lagu samayn doonin Spiridonov ee uu noqon doono nin u dhashay wadanka China.Wali lama sheegin qofka badali doona Spiridonov iyo magaciisa.
Dr. Canavero waxa uu si adag u xusey in uu qalliinka dhacayo dabayaaqada sanadkan ama horaanta sanadka ku xiga.
Gabo gabada maqaalkeena waxay tahay, qalliinkan wali yaabkiisi waa wataa imikana wakasii yaab iyo xiiso badan yahay maadaama wiilkii muddada intaas leeg hawsha kusoo jirey uu si kedis ah uga baxay. Waxa isna dhankiisa ka dedaalaya kooxda qalliinkan ku jirta. Goobtu waa China gudaheeda, bukaanka hawshan lagu samayn doonaana waa nin u dhashay wadanka China oon wali la ogayn cidda uu noqon doono, khubarada iyo dhakhaatiirta hogaamineysaana wa Chinese iyo Jinsiyado kale, balankuna waa December ama horaanta sanadka 2018-ka.
Waxaynu ka war sugnaa waa in baahiyo taariikhda saxda iyo goobta hawshu ka dhacayso iyo qofka hawshan lagu samayn doono sidoo kale qofka kale ee laga soo goyn doono.
Akhristow dedaalka iyo horumarka xawaaraha deg dega ah ku socda ee uu ku jiro cilmiga saynisku kama hor iman karaan awoodaha Alle SWT iyo qadarkiisa. Lama dhaafi karo lagamana dhimi sida Alle SWT ugu talo galay in ay u dhacaan umuuraha aduunka guudkiisa ka dhacayaa.
Ka akhri oo kala soco degeladan:-
Cabdisalaam Saciid Xasan
Hargeysa – Soomaaliland, 2017